warkii.com » Faransiiska Oo Qoomamaynaya In Karim Benzema Uu Ka Maqan Yahay Xulka Qarankooda
Faransiiska Oo Qoomamaynaya In Karim Benzema Uu Ka Maqan Yahay Xulka Qarankooda
Joojinta abaal-marinta Ballon d’Or ee sannadkan iyo Euro 2020, waxay yaraynaysaa hadal haynta warbaahinta Faransiiska ee xiddiga Real Madrid ee Karim Benzema oo bogagga hore ee wargeysyada waaweyn qabsan lahaa.
Tababare Didier Deschamps ayaa ka badbaaday in lagu canaanto inuu Karim Bezema dib ugu soo celiyo xulka qaranka France kaddib ciyaarihii heerka sare ahaa ee uu ka muujiyey horyaalka LaLiga isaga oo xidhan shaadhka Real Madrid.
Faransiiska ayaa ku guuleyestay koobkii Adduunka ee 2018, laakiin waxa aan marna dhamaanin hadal haynta ah in tartankaas iyo qaabka ay u guuleysteen kasii sarrayn lahaa haddii uu la socon lahaa Benzema oo ay ugu dambaysay inuu qarankiisa u ciyaaro October 2015.
Sida uu qoray wargeyska Marca, dad badan oo Faransiis ah ayaa dalbanayay muddadii shanta sannadood ee uu Benzema maqnaa, in dib loogu soo celiyo xulka qaranka, waxaanay baaqyadaasi sii kordheen bilihii ugu dambeeyey.
Wargeyska L’Equipe ee aadka looga akhristo Faransiiska ayaa caddad soo baxay usbuucii hore waxa uu boggiisa hore u hibeeyey Karim Benzema oo uu ammaan badan u jeediyey, waxaana uu ugu hambalyeeyay hanashada horyaalka LaLiga ee ay kooxdiisu ku guuleysatay oo qaybta ugu weyn uu isagu ku lahaa.
Sidaas oo ay tahay, waxa Faransiiska ka jira dareen ah in aanu Benzema dib dambe uga soo muuqan doonin xulka qaranka, go’aankanna yahay mid ka sarreeya tababaraha oo ay madaxda dalku qayb ka tahay.
Waxyaabaha sii adkaynaya wax ka mid in aanu wali dhamaanin kiiskii u dhexeeyey Matieu Valbuena oo iyadoo aanay maxkamaduhu go’aan kasoo saarin laga sii caydhiyey xulka.